Loza teny Andralanitra :: Vehivavy iray maty voahitsaky ny kamiao mpanary fako • AoRaha
Loza teny Andralanitra Vehivavy iray maty voahitsaky ny kamiao mpanary fako
Potsitra tao anatin’ny fako ny vehivavy iray, 22 taona, voahitsaky ny kamiao mpanary fako, tamin’ny zoma alina lasa teo, teny Andralanitra. Tao anatin’ny haizina no nitrangan’ny loza. Voatazona eny amin’ ny tobin’ny Zandarimaria Ambohimangakely atao famotorana ny mpamily ny kamiao ary mety hatolotra ny Fitsarana anio raha tsy misy fiovana.
“Misy olona mitsindroka fako, eny amin’ny toerana midadasika fanarian’ireo kamiao fako, avy aty an-drenivohitra, eny Andralanitra. Rehefa amin’ny alina anefa dia tsy misy olona intsony eny an-toerana satria efa maizina ny andro no mivezivezy eo ireo fiarabe mitatitra fako. Efa namoy ny ainy voahitsaka ilay vehivavy no hitan’ireo mpanatitra fako tao amin’ilay kamiao”, hoy ny loharanom-baovao.
Araka ny fanazavana avy amin’ny Samva na Sampandraharaha mahaleo tena misahana ny fikojakojana ny tanànan’Antananarivo dia: “Tafintohina teo anelanelan’ny kodiaran’ny fiarabe iray hanatitra fako ka voahitsaka ary namoy ny ainy ny vehivavy iray mpitsindroka fako, teny Andralanitra, tamin’ny zoma 10 mey, tamin’ny 7 ora sy sasany hariva”. Nilaza ihany koa ny Samva fa hijery ny fomba rehetra tokony hatao mba tsy hiverenan’ny loza toy izao intsony. Nanampy ny fianakavian’ny maty izy ireo tamin’ity voina ity.
Fihoaram-pefy :: Polisy telo mamo sady namoa-doza teny Ivandry
Ambilobe :: Zandary nitifitra olona nitsoaka